Fifanekena fa Tsy Hamoaka ny Mombamomba Anao | JW.ORG
Fifanekena fa Tsy Hamoaka ny Mombamomba Anao
Manaja ny zon’ny olona hanana ny fiainany manokana ny fandaminan’ny Vavolombelon’i Jehovah (“fandaminana”), mifanaraka amin’ny toro lalan’ny Baiboly. Miaiky ny fandaminana fa ilaina ny mifampiresaka tsy an-kifonofono. Ilainy koa ny manangona ny mombamomba ny olona iray, anisan’izany ny tsiambaratelo sasany. Manao an’izany izy mba hanomezana an’izay ilain’ny Vavolombelon’i Jehovah, sy hanatanterahana ny andraikiny. Fivavahana mpanao asa soa mantsy ny fandaminana. Miaiky koa anefa izy fa ilaina ny mitana tsiambaratelo sy miaro ny fanazavana momba ny olona iray. (Ohabolana 15:22; 25:9) Tena zava-dehibe aminy mantsy izany hoe mitana tsiambaratelo izany.—Ohabolana 20:19.
Firenena maro no namoaka lalàna natao hiarovana ny zon’ny olona hanana ny fiainany manokana. Mbola tsy nisy akory anefa ireny lalàna ireny, dia efa nanaja ny zon’ny olona hanana ny fiainany manokana sy efa nitana tsiambaratelo ny fandaminan’ny Vavolombelon’i Jehovah. Tsy hanaparitaka mihitsy ny mombamomba ny olona iray àry izy, araka ny efa fanaony hatramin’izay. Izany no hita ato amin’ity fifanekena ity.
Iza no voakasika?
Ny fandaminan’ny Vavolombelon’i Jehovah manontolo, ka ny biraon’ny sampana eran-tany no misolo tena azy.
Ireto toro lalana ireto no arahin’ny fandaminana rehefa voarainy ny mombamomba ny olona iray:
Hokirakiraina amin’ny fomba ara-drariny sy ara-dalàna izy ireny.
Izay fanazavana ilain’ny fandaminana ihany no hangoniny sy hokirakirainy ary hampiasainy, satria izy fivavahana mpanao asa soa.
Izay fanazavana farany sy marina tsara momba an’ilay olona no hotehirizin’ny fandaminana. Tonga dia hahitsiny mantsy izay fanazavana diso, raha vao fantany.
Hotehirizina izay fanazavana momba an’ilay olona, raha mbola ilain’ny fandaminana sy mifanaraka amin’ny tanjony.
Hohajaina araka ny tokony ho izy ny zon’ny olona hanana ny fiainany manokana.
Hisy fepetra horaisina hiarovana ny mombamomba ny olona iray. Amin’izay dia tsy ho afaka hanaparitaka an’izany ny olona tsy nahazo alalana na tsy manara-dalàna. Misy tenimiafina mantsy idirana ao amin’izay ordinatera itehirizana ny mombamomba ny olona tsirairay, ka izay nahazo alalana ihany no mahalala an’ilay izy. Mihidy lakile koa ny birao misy an’ireo ordinatera ireo aorian’ny ora fiasana, ka izay mahazo alalana ihany no afaka miditra ao.
Tsy hampitaina any amin’ny sampana hafa ny mombamomba ny olona iray, raha tsy hoe ilain’ny fandaminan’ny Vavolombelon’i Jehovah mba hanatanterahana ny andraikiny angaha, noho izy fivavahana mpanao asa soa. Manaiky an’izany ny Vavolombelon’i Jehovah rehetra, satria safidin’izy ireo ny ho lasa Vavolombelon’i Jehovah fa tsy nisy nanery azy.
Zon’ny tsirairay ny miaro sy manitsy na manafoana an’izay fanazavana momba azy, anisan’izany ny tsiambaratelo sasany. Omena alalana hanao izany izy, araka ny fanaon’ny Vavolombelon’i Jehovah voalaza ato amin’ity fifanekena ity.
Izay mangataka hampiasa an’io zony io, dia tsy maintsy manome porofo ampy tsara hoe tsy mpisandoka izy.
Raha misy olona mangataka ny hijery na hanitsy na hanafoana an’izay fanazavana momba azy, dia hojeren’ny fandaminana raha azo ekena na tsia ny fangatahany. Tian’ny fandaminana ny hanome fahafaham-po ny fangatahan’ilay olona. Tsy maintsy dinihiny koa anefa sao hitondra fahavoazana ho an’ny fandaminana izany, ary sao ho voatohintohina ny zony haneho an-kalalahana ny zavatra inoany sy hanaraka ny fanaony raha ekeny ny fangatahan’ilay olona.
Mitondra soa ho an’ny fandaminana ny mitahiry ny fanazavana voarainy momba ny Vavolombelon’i Jehovah tsirairay. Mety hanohintohina be ny zon’ny fandaminana haneho ny zavatra inoany sy hanaraka ny fanaony ny fanafoanana an’ireny fanazavana ireny.
Fiarovana ny zo
Afaka manoratra any amin’ny Komitin’ny Sampana izay mieritreritra fa tsy voahaja ny zony. Manomboka amin’ilay andro ahitany hoe voahitsakitsaka ny zony, dia manana roa herinandro izy mba handefasana an’ilay taratasy mitaky izany zony izany.